ကျေးဇူးတင်ပါသည်! ကျွန်ုပ်သည် Feed Readers 700 နှင့် Technorati ၏ Mark 2,000 ကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ | Martech Zone
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ကျွန်ုပ်သည် Feed Readers 700 နှင့် Technorati ၏ Mark 2,000 ကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇူလိုင်လ 11, 2007 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကငါကျွေးမွေးခဲ့သည် ကျွန်ုပ်၏ Technorati ရာထူးကိုကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်မည်မျှအောင်မြင်ခဲ့သည်ဖြစ်စေဆက်လက်တည်ရှိနေသည်ဖြစ်စေမလမ်းညွှန်အဖြစ်အသုံးပြုခြင်းကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်ပါသည်။ ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာအတွက်ကျွန်တော်သည် ၂၀၀၀ ရာထူးနှင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်နီးစပ်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်သည် ၂၀၀၀ ကျော်အထိပင်နှစ်မြှုပ်ခဲ့ပြီးသော် ၂,၀၃၈ အထိပြန်ပေါ်လာသည်။ ဟုတ်ပြီ ဒါဟာငါ့ကိုအခွံမာသီးမောင်းထုတ်ရန်စတင်ခဲ့သည်။ ငါနေရာတိုင်းမှာနံပါတ် 2,000 မြင်နေခဲ့သည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် ၂၀၀၇ သည်လူကြိုက်များသည်။
အားလုံး၏အလယ်တွင်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်သည် (Technorati ၏ထိပ်ဆုံး ၁၀၀ တွင်) Slashdot ၏ပင်မစာမျက်နှာပင်ဖြစ်သည်။ Slashdot ကငါ့ကိုနဲ့ငါပြောရင်ငါစိတ်ဓာတ်ကျတယ် ဆဲ ၂၀၀၀ ကိုမဖျက်နိုင်ဘူး တစုံတခု ငါလုပ်နိုင်တယ် အဲဒီမှာရှိတယ်!
Technorati 2,000 Mark ကိုဖြတ်သန်းရန်ကျွန်ုပ်၏မဟာဗျူဟာ -
ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့်အခြားသူများအားသူတို့၏ဘလော့ဂ်ကိုအသုံးချခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်သိရှိခဲ့သည့်အချက်အလက်များကိုယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ တစ်ခါတစ်ရံအကြံဥာဏ်ကိုဖတ်ရန်လွယ်ကူသည်၊ သို့သော်ယင်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည်ခက်ခဲနိုင်သည်။ ဒါနဲ့ငါသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ဘလော့ဂ်တင်ရန်။ ငါကစကားလုံးတွေကိုချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဆုံးသတ်သွားတာနဲ့အမျှဒီအသုံးအနှုန်းကိုအတော်လေးနည်းနည်းပဲသုံးခဲ့တယ်။ မျှော်လင့်ငါသော်လည်းပေါ်မှာလှည့်ဖျားထားတော်မူ၏။ ငါရိုးရှင်းစွာငါသူတို့မိုင်းဖော်ပြခဲ့ပါလျှင်သူတို့၏ဘလော့ဂ်တိုးတက်စေရန်အကြံပေးချက်များထောက်ပံ့ကူညီခြင်းနှင့်အတူရှေးရှေးအကူအညီနဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
ပိုက်ဆံမရှိ၊ လက်ဆောင်များ၊ ပြိုင်ဆိုင်မှုများမရှိ၊ အခမဲ့ကူညီခြင်း။ ယောက်ျားလေး၊ သင်တို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါ ၂၀၀၀ အဆင့်ကိုဖြတ်ပြီးငါအများကြီးထပ်မံယူဖို့အရှိန်ရခဲ့တယ်။ ဒါဟာခက်ခဲတဲ့နည်းဗျူဟာတစ်ခုပါပဲ။ ဘလော့တစ်ခုစီကိုဖတ်၊ စစ်ဆေး၊ သုတေသနလုပ်ဖို့လိုတယ်။ ငါအကြံပေးချက်များ regurgitate ဖို့ကြိုးစား - ငါတကယ်ငါဘလော့ဂ်တစ်ခုချင်းစီနှင့်အတူထူးခြားသောပြissuesနာများကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားပါ။
ဒါဟာစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ပါ။ ငါလတ်တလောမှာတော့ငါအများကြီးသင်ယူကြသည်။ အမှတ်တမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာစာဖတ်သူများသည်ကျွန်ုပ်၏ပို့စ်ကို ကိုးကား၍ ဘလော့ဂ်အချက်အလက်များသိရန်နှင့်ပြောင်းလဲမှုများကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ကိုကိုးကားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကငါတောင်မှမမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့တယ်။
ငါချိန်းတွေ့ခဲ့ရတာကအကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုပဲ Lendo.org ကိုမှတ်သားပါအင်္ဂလိပ်လိုတောင်မှဘလော့ဂ်တစ်ခု! ငါအချို့သောအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုရန်ဘာသာပြန်များကိုအသုံးပြုသော်လည်း - အကြောင်းအရာများသည်ဘလော့ဂ်ပေါ်ရှိအကြောင်းအရာများကိုသာဖတ်ရန်ဖြစ်သည် (ဖတ်ရန်) ။ ငါ post ကိုပြီးတာနဲ့အမြန်ဆုံး, အန်ဒရီနှင့်သူ၏စာရေးဆရာ Daisy, အလျင်အမြန် အချို့သောအံ့သြဖွယ်အပြောင်းအလဲများကိုအကောင်အထည်ဖော် - သင့်ကိုအိမ်၌စာဖတ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်စေသည့်လှပသောခေါင်းစီးဂရပ်တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ အန်ဒရီနှင့်ဒေစီတို့မှဘလော့ဂ်သည်ယခု မှစ၍ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မည်သို့လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုပြန်ကြားရန်ကျွန်ုပ်မစောင့်နိုင်ပါ။
စာဖတ်သူ ၇၀၀ ကျော်ဒီနေ့မှာပန်းတိုင်နှစ်ခုရှိခဲ့တယ် FeedBurner နှင့် 2,000 ရာထူးအပေါ် Technorati။ ကျွန်တော့်စာဖတ်သူများအတွက်အသစ်နှင့်အဟောင်းများအတွက်ကျွန်ုပ်ကိုဒီအမှတ်အသားများဆီပို့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ယခုနှစ်အကုန်တွင်ကျွန်ုပ်အစာကျွေးသောစာဖတ်သူ ၁၀၀၀ ကိုချိုး ဖျက်၍ Technorati အဆင့် ၁၀၀၀ သို့အမှန်တကယ်မောင်းလိုသည်။ သင်ထွက်ခွာဖို့စဉ်းစားနေရင်ငါ့ကိုသိပါစေ။ ငါသည်သင်တို့ကိုလှည့်ပတ်ကပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်!
Blog-Tipping: Blog ည့်သည် Blogger Blog
ငါ Post ရေးသားဖို့စတင်ခဲ့ ...
11:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 35
12:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 7, 15
Slaptijack၊ စကားပြောစရာမလိုပဲဘလော့ဂ်တစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူး။ ဒီဘလော့ဂ်ကိုအများကြီးလှူဒါန်းခဲ့သောအံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကောင်းတဲ့အုပ်စုများအတွက်ငါတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မှတ်ချက်များသည်မည်သည့်ဘလော့ဂ်မဆိုအောင်မြင်မှုအတွက်အဓိကကျသောအရာများဖြစ်သည်။ အခြားဘလော့ဂ်များနှင့်ကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်များသည်ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်ဖြစ်သည်။
12:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 07
သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကိုပြည့်မီအောင်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခြင်းများ…သူတို့သည်သင်၏ဖြစ်ပျက်လာသောအခါသင့်အားအလွန်မြန်ဆန်စွာပေးစွမ်းနိုင်ပြီးသင်၏နောက်ပန်းတိုင်များကိုသင်ချမှတ်သည့်အခါတစ် ဦး တည်းအတွက်ငါရှိနေ ဦး မည်ဖြစ်သည်။
12:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 7, 17
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စတီဗင်! ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးမှတ်ချက်ကိုဖတ်ပါ။ သင်အမှန်တကယ်ကဒီအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူစေပါဘူး!
12:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 47
12:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 1, 26
သင်၏ရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်ချစ်ပါ။ သင်ရရှိနိုင်ပါကတက်ထားပါ။
12:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 7, 16
12:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 6, 53
အဲဒီနောက်မှာငါနဲ့ Daisy မှာစာဖတ်သူအသစ်နှစ်ယောက်ရှိလာတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းတို့ကိုမင်းကိုအကြံပေးချင်ပါတယ်! ဤရွေ့ကား 'ယောက်ျားတွေအများကြီး' အခြားသူများကို 'အများကြီးယောက်ျားတွေ' 'ဖို့အကြံပြုလိမ့်မယ်။
အလွန်ဂုဏ်ယူပါတယ် ဒါဟာသင့်ရဲ့အရည်အချင်းပါ။ 🙂
12:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 7, 18
မင်းကိုပေးခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အန်ဒရေ! ကျွန်တော်တို့ကိုအမှုအရာတိုးတက်ပုံကိုသိပါစေ။
12:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 7, 21
ဒါပေါ့! ငါဆက်သွယ် keep ပါလိမ့်မယ်
12:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 31
12:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 26
12:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 29
ဂုဏ်ယူပါတယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲသင်စာရင်းသွင်းသူ ၅၀၀ ကိုအမှတ်ရပြီးနောက် 500 ကိုထပ်ထည့်ပြီးပြီ။ မင်းအခုကောင်းနေပြီ စာဖတ်သူ ၁၀၀၀ ကိုမနှိပ်ခင်အချိန်ကကိစ္စပဲ။
15:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 41
ဒါဟာအရှိန်အဟုန်အကြောင်းကိုအားလုံးပုံရသည်မဟုတ်လော ငါဒီအကြောင်းကိုခဏလောက်ဟောပြောနေတယ်၊ ​​အဲဒါကဘယ်လိုဆက်ပြီးကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာပါ။
ကြီးထွားမှုကိုအစကတည်းကတွေ့မြင်ခဲ့ဖူးသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည် Fibonacci နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်ထင်သည်။ 1,2,3,5,8,13,21 …
15:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 6, 43
ဂုဏ်ယူပါတယ် ငါဘယ်နေရာကိုမှမသွားဘူးဆိုတာသေချာတယ် ငါသာလုပ်ခဲ့ရင်မင်းကမင်းကိုအမြန်ဆုံးစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရင်းခေါင်းစဉ်ကြီးတစ်ခုနဲ့မင်းကိုအမြဲတမ်းဖမ်းဆီးနိုင်မှာပါ။
15:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 42
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Tinu! ငါတကယ်ထောက်ခံမှုအားလုံးကိုတန်ဖိုးထားတယ်။ 🙂
ဇန်နဝါရီ 9, 2009 မှာ 10: 20 AM
ငါလပေါင်းများစွာ blogging လုပ်နေတယ်၊ ​​ငါဟာအသွားအလာမကောင်းနေတုန်းပဲ၊ သင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းမချိုးနိုင်သေးဘူး။ ဤနည်းဗျူဟာသည်ကျွန်ုပ်၏နည်းပညာများအတွက်အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်🙂